Cabdi Iley oo dagaal aan ujeedo lahayn uu Tafa Xaytay. – Xeernews24
Cabdi Iley oo dagaal aan ujeedo lahayn uu Tafa Xaytay.
25. Oktober 2017 /in WARAR/NEWS /von admin
Madaxweynaha deegaanka Soomaalida Ethiopia maamusho Cabdi iley ayaa dhamaan degmooyinka deegaanka iMagaalooyinka iyo tuulooyinka ka soo kaxeeyey oday dhaqmeedkii joogay iskuguna keenay magaalada Jigjiga. Odayaasha ayaa si qasab ah ilaa shalay iyo xalay lagu soo daabulayey gawaadhida qabaalada ee ciidanka Liyuugu leeyihiin waxaana la dajiyey xeryaha ciidanka liyuuga ee magaalada Jigjiga.
Saaka subaxdii ayaa odayaasha qabiil-qabiil iyo degmo-degmo loo kala saarey, kadib waxaa la iskugu geeyey hoolka shirarka iyagoo intii isku qabiil ah ama isku degmo ahba meel la wada fadhiisiiyey.
Cabdi ayaa hadal dheer ujeediyey oo faata-dhuglayn u badnaa, waxaase ugu muhiimsanaa qodobadan:
1) Odayaasha waxuu ku amrey in degmo walbaa keento 400 oo ciidan ah, waliba si dhakhso ah ku keento.
2) Waxuu yidhi wadanka xukun military (Marshall law) ayaa lagu soo rogayaa inaga Soomaali ahaan Oromada ayaa la inoo xilsaarey inaan gacan birr ah ku qabano, Tigreena Axmaarada ayeey gacan ku qabanayaan.
Lama oga warka Cabdi Iley in uu xaqiiq yahay iyo in kalee, dad ku nool gobolka Sitti oo aan arinta wax ka waydinay waxay noo xaqiijiyeen in warkaasi run yahay oo gaar reer Sitti tuula walba odey dhaqmeedkii ku noola si qasab ah amar loogu siiyey in u odey walba keeno wiilaal lagu dagaal galo si duulaanka iyo daan-daansiga oromada looga hor tago waxaan degmooyinka qaarkood laga bilaabay qoritaanka dhalinta reer Sitti iyagoo loogu balan qaaday in lasiin doono hub,direys ciidaan mushaarooyina loo qori doono.
Laakiin Balan qaad mooye lama hayo wali hub ama direys ah oo soo gaadhay dhalintii sida qasabka ah wax loogu sheegey oromadi lagu soo direyna waxay la diyaar tahay dagaal iyadoo heshay hub iyo saanad culus oo maamulka Oromadu ugu deeqay.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/10/Cabdi-iley-odey.jpg 784 480 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2017-10-25 18:59:462017-10-25 18:59:46Cabdi Iley oo dagaal aan ujeedo lahayn uu Tafa Xaytay.
Madaxweyne Farmaajo “Musiibadii ka dhacday Soobe si aysan mar kale noogu soo... DAAWO: Beesha Habar Gidir oo soo bandhigtay tirada dadkii uga dhintay Qaraxii...